Batch yechipiri ye yemahara mitambo yeApple Watch yedu ichangosvika uye pazasi isu tinokusiya iwe link neyekutanga kuitira kuti kana usina kuvaona. Mune ino kesi, senge iri muchinyorwa chakapfuura, iyo mitambo ndeye mahara uye inopa zvakabatanidzwa kutenga kune avo vaunoda, asi pachangu ndinofanira kutaura kuti handizvishandise zvachose sezvo iri mitambo yemitambo isingazotipinze maawa mazhinji , seizvi kuti hatidi kushandisa chero chinhu pazviri kana tisingade.
Tinotanga nemutambo unovaraidza unonzi Kufunga. Mutambo uyu unotipa mukana wekufungidzira izwi rine mifananidzo mina, izvi tinofanirwa kunyora pazasi peApple Watch yedu uye inonakidza.
Tinoenderera mberi Pong, mutambo wakafanana neuyo vazhinji veterans vanozoyeuka vachitamba. Ehe, isu tinofanirwa kufambisa iyo yepadivi nekorona yedu yedhijitari kuitira kuti bhora rihombe uye muvengi wedu arege kuidzosa. Uyu mutambo unopa dzimwe sarudzo kuti uchinje kuoma uye mavara patinobata pasi iyo skrini, asi iwe unofanirwa kuenda kuburikidza nebhokisi mune mazhinji acho uye isu hatifunge kuti zvakakosha.
Ping Pong - Watch Retro Arcadevakasununguka
Pakupedzisira mune dzino nhete tinawo Fruitozzo, mutambo wakafanana nesudoku puzzle yatinowanawo yemahara kune yedu Apple Tarisa muchitoro cheapp. Tinogona kutaura kuti mutambo uyu unosanganisira kuisa zvine hungwaru michero kuitira kuti vasave mukolamu imwe chete yechina uye kuti vapatsanurane. Mutambo unovaraidza uyo unotipa iwo mwero wepamusoro wekuoma.